Ileba Anya n'Ọdịnihu Digital nke Mgbasa Ozi Globalwa | Martech Zone
Ileba Anya n'Ọdịnihu Digital nke Rlọ Ahịa Global
Monday, June 24, 2013 Douglas Karr
Ndị enyi anyị na ExactTarget wepụtara akwụkwọ ozi a, Ileba Anya n’ọdịnihu nke ahịa ahịa ụwa.
Ọdịnihu nke ịzụ ahịa dijitalụ na-egbuke egbuke. Ndị ahịa ahịa ndị ahịa mba ụwa amalitela mgbe ọbịbịa nke teknụzụ na ọwa ọhụrụ, ọwa ndị a na-achọkwa ụdị azụmaahịa ọhụrụ. N'iji usoro mgbasa ozi na usoro karịa ahịa karịa, ndị na-ere ahịa n'oge a ga-elerịrị anya na usoro ndị dị ugbu a iji kwadebe atụmatụ ha maka ọdịnihu. Kyle Lacy, Onye isi njikwa Ọdịnaya Marketing & Nnyocha
Ihe omuma ihe omuma bu nkenke ma di nkpa banyere mgbanwe nzụta ahia nke ndi ahia, mkpa nke uzo di iche iche na otutu ihe ojoo.
Etu ị ga-esi mee SEO dị na mpaghara na mmefu ego
Akwụ ụgwọ maka Direct Duplicates